फूलखेतीबाट महिनामै डेढलाख नाफा, मख्ख छिन हुमा गुरुङ ! – Rastriyapatrika
फूलखेतीबाट महिनामै डेढलाख नाफा, मख्ख छिन हुमा गुरुङ !
बेसीशहर : बेसीशहर–५ बोहोराबेसीकी हुमा गुरुङलाई घाम उदाएदेखि अस्ताएसम्म फूलबारीमामा काम गर्न भ्याईनभ्याई छ । माटो र फूलसँगै रम्न पाउँदा सारा दुःख, पीडा भुलेको महसुस भएको गुरुङ बताउँछिन् ।
‘फूलको हेरचाहमै दिन बित्छ, बिहान उठेदेखि नै फूलमा पानी हाल्यो, गोडमेल ग¥र्यो, समय बितेको पत्तै हुँदैन । यसैमा खुसी र सुखी छु’, हुमाले भनिन् । हुमाको फूलबारी नर्सरीमा सयभन्दा बढी प्रजातिका फूलका विरुवा हुर्किरहेका छन् । चार रोपनीमा फूलका विरुवा र थप चार रोपनीमा चाईनिज दुवो खेती भैरहेको हुमाले बताइन् ।
चार वर्षअघि धान खेती भइरहेको जग्गा भाडामा लिएर पुष्प नर्सरी सुरु गर्दा हुमालाई हौसला दिनेभन्दा गिज्याउने धेरै थिए । त्यसबेला पुष्पखेती पनि हुन्छ र ? भनेर प्रश्न गर्नेहरु अचेल हुमाले यसबाट गरिरहेको आम्दानी देखेर जिब्रो टोक्न थालेका छन् । १० लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको यो व्यवसाय अहिले ६० लाखको पुगेको हुमा बताउँछिन् ।
२०७१ सालमा पुष्प व्यवसायमा प्रवेश गरेकी हुन् हुमा । विभिन्न फूल र फलफूलका बिरुवा तयार गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित उनको पुष्प नर्सरी व्यवसायले अहिले फड्को मारेको छ । उनले नर्सरीमा बिरुवा तयार पार्नुका साथै फूल खेती पनि गर्दै आएकी छन् ।
दुईवटा ग्रिनहाउस नर्सरीमा सयपत्री, बहुवर्षे जिरानियम, जर्बेरा, पिटुमिया, डायन्थल्स, बेगनवेलिया, गुलाव, धुपी, क्रोटन, क्रिसमसलागयतका फूलका बिरुवा उत्पादन र बिक्री भइरहेको छ । यस्तै हाईव्रिड जातका कागती, अम्बा, आँप, लिची, एभोगार्ड, सुन्तला मुन्तला, अनार, रुद्राक्ष, बुद्धचित्तलगायतका विरुवा पनि उपलब्ध छ ।
‘फूलमा भन्दा फूलका बिरुवा बेच्न फाइदा हुन्छ’, उनले सुनाइन् । ‘अहिले फूल र नर्सरीमा तयार पारिएका बिरुवा बेचेर दैनिक १० हजार आम्दानी हुन्छ’, हुमाले भनिन, ‘यसरी हेर्दा मासिक तीन लाख आम्दानी हुन्छ । आफ्नो र कामदारको तलब, विउ, जग्गाभाडा आदि कटाउँदा डेढलाख चोखो बच्छ ।’
‘दिनमा १० हजारदेखि डेढलाख सम्मको फूलका बिरुवा बेचेँ । सार्वजनिक कार्यक्रममा खादा भन्दा मालाको माग बढ्दो छ’ हुमाले भनिन्, ‘उत्पादनले बजार नपाउने चिन्ता छैन, मागअनुसार पु¥र्याउनै सकेको छैन ।’हुमाले जिल्लामै पहिलोचोटी पुष्प व्यवसाय सञ्चालन गर्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङले बीउ खरिदका लागि केही रकम सहयोग गरेको थियो । तर, त्यसयता सरकारी निकायबाट सहयोग पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।